नेपालमैं अप्रेसनबाट कृतिम याेनी, पाेखराकी यी युवतीले पाइन् नयाँ जीवन ! - Everest Dainik - News from Nepal
नेपालमैं अप्रेसनबाट कृतिम याेनी, पाेखराकी यी युवतीले पाइन् नयाँ जीवन !
काठमाडौंः महिनावारी आज होला, भोलि होला भन्दाभन्दै २६ वर्ष भइसकेकी थिइन् पोखराकी एक युवती । महिनावारी हुने उमेरको दोब्बर अर्थात् २६ वर्षसम्म पनि महिनावारी नभएपछि चिकित्सककहाँ सल्लाह लिन पुग्नु स्वाभाविक थियो । महिनावारी नभएर विवाह गर्न समेत अप्ठ्यारो भएपछि उनी चिकित्सकहाँ पुगिन् ।
इशान बाल तथा महिला अस्पतालका महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. आशा सिंहको नेतृत्वमा बालरोग विशेषज्ञ डा.आरपी चौधरी, डा. सुमनबिक्रम अधिकारी र एनेस्थेसिया चिकित्सक डा. छन्दबहादुर बुढाथोकीको टोलीले सातघण्टा लामो शल्यक्रियापछि ती युवतीको योनीद्वार बनाएको हो ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्री देउवालाई पोखरामा कालो झण्डा
उपचारमा संलग्न डा. सिंहले समान्यतया १२ वर्षदेखि महिनावारी हुने गरे पनि ती युवतीको २६ वर्षसम्म पनि महिनावारी नभएको जानकारी दिए । यो अत्यन्त जटिल शल्यक्रिया हो, उनले भने,“योनी नभएको महिलाको शरीरमा योनी बनाउनु ठूलो चुनौती थियो ।”
पेशाले एयर होस्टेज ती युवतीको योनीको कृत्रिम रुपमा शल्यक्रिया गरी बनाइएको छ । डा. आरपी चौधरीले ती युवतीमा पिसाब फेर्ने मात्रै प्वाल रहेको भन्दै शल्यक्रियाका माध्यमबाट कृत्रिम योनी बनाइएको बताए ।
उनले यस्तो समस्या दुर्लभ मात्रै देखापर्ने बताए। युवतीले योनीको समस्याका बारेमा आफ्नो प्रेमीलाई समेत भनिसकेको र अबको केही महिनाभित्रै विवाह गर्ने तयारीमा रहेकी छन् । शल्यक्रिया गरी बनाइएको योनीले महिनावारी हुने र यौन सम्पर्क गर्न पनि सकिने डा. चौधरीले बताए ।
याे पनि पढ्नुस प्रदेश नं ४ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा घिमिरे सिफारिस
चौधरीले पाठेघर नभएका कारण सेरोगेसीको माध्यमबाट बच्चा पाउनसक्ने जानकारी दिए । अति नै दुर्लभ र जटिल शल्यक्रिया भएको दाबी गर्दै उनले ती युवतीको शारीरिक तथा जैविक बनौट र बाहिरी यौनाङ्ग महिलाको भए पनि क्रियाशील नभएको दुई गर्भाशय समेत रहेको जानकारी दिए ।
याे पनि पढ्नुस यौनकर्मीलाई परिचयपत्र दिएर कर उठाऔं : मुख्यमन्त्री गुरुङ
डा. सिंहले ती युवतीलाई शल्यक्रिया पछि सातौँ दिनमा घर फर्काइएको जानकारी दिँदै यस किसिमको जटिल शल्यक्रियामा लामो समयसम्म चिकित्सकसंँग ‘फलोअप’मा बस्नुपर्ने बताए ।
गोरखापत्र दैनिकमा सराेज ढुंगेलकाे रिपाेर्ट साभार गरिएकाे आवरण तस्वीर: यस्तै प्रकृतिकाे उपचारबाट नयाँ जीवन बाँचिरहेकी एक अमरकी युवती, डेलिमेलबाट
ट्याग्स: Artificial Vagina, Pokhara